यस्तो छ जाजरकोट, बैतडी र सोलुखुम्बुमा वाम गठबन्धनको अग्रता « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
यस्तो छ जाजरकोट, बैतडी र सोलुखुम्बुमा वाम गठबन्धनको अग्रता
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शक्तिबहादुर बस्नेतले एक हजार १७१ मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका राजीवविक्रम शाहले ८६२ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै प्रदेशसभा (क) मा वाम गठबन्धनकै गणेशप्रसाद सिंहले एक हजार ३८१ र काँग्रेसका वेदराज सिंहले ७४१ प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशसभा (ख) मा पनि वाम गठबन्धनकै करवीर शाहीले एक हजार २०० मत प्राप्त गरी अग्रता लिएका छन् भने काँग्रेसका दीपकजंग शाहले ६६२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
बैतडी– एक हजार ३७६ मतगणना हुँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनकाबाट नेकपा (एमाले) का दामोदर भण्डारीले ६५९ मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् । त्यस्तै काँग्रेसका नरबहादुर चन्दले ५४४ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी प्रदेशसभा (क) मा ९४८ मतगणना हुँदा काँग्रेसका हरिमोहन भण्डारीले ४११ र वाम गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रेमप्रकाश भट्टले ४११ मत प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशसभा (ख) मा एक हजार ३०५ मतगणना हुँदा वाम गठबन्धनबाट एमालेका लीलाधर भट्टले ६६७ र राप्रपाका गणेश चन्दले ५६८ मत प्राप्त गरेको प्रजिअ सिद्घराज जोशीले जानकारी दिए ।
सोलुखुम्बु– प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनको अग्रता रहेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ एक हजार ४१७ मतगणना गर्दा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका हेमकुमार राईले ७३४ मत ल्याएर अग्रता लिएका छन । काँग्रेसका बलबहादुर केसीले ४३७ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै प्रदेशसभा (क) मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका उत्तमकुमार बस्नेतले ४२५ मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् भने काँग्रेसका प्रकाससिं कार्कीले १७४ ल्याएका छन् । प्रदेशसभा (ख) मा गठबन्धनबाटै एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले २४५ मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् भने काँग्रेसका आङ्गगेलु शेर्पाले २३० मत ल्याएका छन् । रासस
खेलको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने : मन्त्री वि.क
पोखरा । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले सातवटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रंशाला निर्माण गरिने बताएका छन्
पर्यटन विकासका लागि साहित्य सम्मेलन
रोल्पा । रोल्पामा पर्यटन विकासका लागि साहित्य’ नाराका साथ लिवाङमा वृहत् साहित्य सम्मेलन हुने भएको
ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा रामेछापको बेतालीमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले मिति २०७४ चैत्र ६ गते देखि रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाँउपालिका
शारीरिक एवं मानसिकरुपमा अशक्त कर्मचारीलाई मात्र स्वेच्छिक अवकाश – मन्त्री पण्डित
विराटनगर। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दक्ष जनशक्ति रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीलाई स्वच्छिक
सान्जेन र रसुवागढीको दोस्रो चरणको ४७ करोड बराबरको आइपिओ बजारमा,…
थाइराइड के हो ? यो रोग लाग्नुको प्रमुख कारण र…
१११ मेगावाटको रसुवागढी अन्तिम चरणमा, साँढे १३ अर्बको आयोजना आगामी…
कसरी हुन्छ सेयर सूचिकरण ? कती लाग्छ शूल्क ?
प्रतिसेयर आम्दानी १३ रुपैँया रहेको सांग्रिलाको नौ लाख कित्ता सेयर…
सूर्याको झण्डै २९ करोडको हकप्रद स्वीकृत, चुक्तपूँजी र सेयरमुल्य कती…
रोजगारीमा नरहेकोले पनि सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने
आफ्नो लागि आफैँ सेनेटरी प्याड बनाउँदै छात्रा
मोरङ । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–१ स्थित नुनसरी आधारभूत विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रा नुमा